डी.एस.पी.लार्इ निलम्बन गर्न अख्तियारको निर्देशन-NepalKanoon.com
डी.एस.पी.लार्इ निलम्बन गर्न अख्तियारको निर्देशन
श्रावण १०, काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी नायव उपरीक्षक डी.एस.पी. दिनेश आर्चायलार्इ निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबलमा प्रमुख रहेका निजलाई घुस लिएको अभियोगमा निलम्बन गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको हो ।
डीएसपी आर्चायलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिई अख्तियारले शुक्रबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगको पत्र पाएलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले डी.ए.सपी. आर्चायलाई निलम्बन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
१ लाख ५० हजार घुस लिएको अभियोगमा आयोगले डीएसपी आर्चायलाई निलम्बनको सिफारिस गरेको हो । आफ्नै मातहतका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामप्रसाद पौडेलले घुस लिन डीएसपीले आदेश रहेको बयान दिएपछि उनलाई अख्तियारले पत्राचार गरेको थियो ।